people Nepal » कसरी एक्कासी डुबानमा पर्‍यो भक्तपुर ? कसरी एक्कासी डुबानमा पर्‍यो भक्तपुर ? – people Nepal
कसरी एक्कासी डुबानमा पर्‍यो भक्तपुर ?
Posted on July 12, 2018 by Purna Nanda Joshi
अहिलेसम्म डुबानले मानवीय क्षति भएको छैन। डुबानमा परेका २०० जना बढीको उद्दार भएको छ। प्रहरीका अनुसार बालकोट जाने बाटोमा बन्दै गरेको पुल बगेको छ भने अन्य क्षतिको विवरण आइसकेको छैन।
यता मनोहरा खोलामा आएको बाढी बस्तीमा पसेपछि जडीबुटीस्थित सुकुम्बासी बस्ती पूरै डुबानमा परेको छ। घर बाहिर निस्कन पनि नसक्ने र घरभित्रै बस्न पनि नसक्ने अवस्थामा परेको स्थानीय अमर थापाले जानकारी दिए ।
१०० किलोमिटर स्क्वायरभन्दा ठूलो क्षेत्रमा फैलिएको जलाधारको लागि त्यसमा प्रवाह हुन सक्ने बहावको सही मुल्याङ्कन नगरी संरचना निर्माण भएकाले भक्तपुर डुबानमा परेको विज्ञहरूको भनाइ छ। रासस
सोमबारदेखि पुनः वर्षा र हिमपातको सम्भावना